eSIM waxay u timid iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR | Wararka IPhone
ESIM wuxuu yimaadaa iPhone XS cusub, iPhone XS Max iyo iPhone XR qof walba
Jordi Gimenez | | iPhone Xr, iPhone Xs, Terminalka IPhone
Mid kale oo ka mid ah riwaayadihii waaweynaa ee aan laga dareemi karin soo bandhigiddii shalay ee kuwan cusub ee iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR, waa imaatinka eSIM taasi waxay u oggolaaneysaa qof walba inuu ku raaxeysto labada SIM ee iPhone-ka cusub kiiskan Nano SIM iyo eSIM.
Waxaas oo dhami waxay siin doonaan dadka isticmaala safarka ugu badan ama kuwa u baahan inay maareeyaan laba sadar oo shaqada ka shaqeeya raaxo dheeraad ah. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan awoodi doonno inaan ku raaxeysanno dhowr shaqaale ah dhammaan moodooyinka cusub ee iPhone, tani waxay ku mahadsan tahay eSIM, oo sidoo kale loo yaqaan 'SIM' dalwaddii. Sidoo kale waa in la cadeeyaa inuu jiro daabac yar iyo sida oo kale, waa muhiim inaan horay u aqrino.
1 Labada Garab istaag shaqada Dual SIM
2 Ciyaarta ayaa saaran hawl wadeenada
Labada Garab istaag shaqada Dual SIM
Magacan Apple wuxuu ku baabtiisaa adeegiisa labada SIM ah iPhone-ka cusub macnahiisuna maaha wax kale labada kaar ee aan ku haysanno iPhone-ka ayaa isku mar wada shaqeyn doona. Sidan oo kale, markaan wacno mid, waxay ahaan doontaa kaarka ugu weyn waqtiga la badalayo midka kale si otomaatig ah ayey isu bedeleysaa. Wadamada ay ka mid yihiin Shiinaha, Apple-ka iPhone Dual SIM ee Apple wuxuu isku darayaa laba kaar oo muuqaal ah, laakiin wadamada intiisa kale eSIM ayaa lagu darayaa gudaha, kaarkaas oo qaar ka mid ah noocyada iPad-ka ay horeba u sitaan iyo sida muuqata Apple Watch oo wata LTE.
Ciyaarta ayaa saaran hawl wadeenada
Waana in Apple ay ku dhawaaqday qodobka muhiimka ah qaar ka mid ah hawl wadeenada horeyba u haystay adeegan si marka ugu dhakhsaha badan ee iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR ay u iib galaan, dadka isticmaala ay qandaraas ugu heli karaan adeegyadan Dual SIM-ka ah. In kasta oo, sidaan bilowgiiba nidhi, tani kama dhici doonto waddammada oo dhan waana taas sababta aan ugu baahanahay inaan ka eegno bogga Apple oo aan akhrinno wixii aan ku nidhi bilowgii maqaalkan, oo ah Waxay noqon doontaa daabacaadda yar ee ka muuqata bogga Isbaanishka:
ESIM waxaa la heli doonaa dhamaadka sanadka iyada oo loo marayo cusbooneysiinta barnaamijka. Adeegsiga eSIM wuxuu u baahan yahay qorshe xog oo moobil ah (oo ay ku jiri karaan u-qaadis gaar ah iyo xaalado wareegaya, xitaa marka joogitaanku dhammaado). ESIM lama jaanqaadi karto dhammaan wadayaasha. ESIM waxaa laga yaabaa in ay naafo noqoto marka ay wax ku iibsaneyso iPhone-ka iyada oo loo marayo maraakiibta qaarkood. Ka hubi faahfaahinta wadahaaga
Marka tillaabooyinka hadda waa kuwo fudud oo Waxaan sugi doonaa cusbooneysiinta si aan u awoodno inaan ku isticmaalno eSIM-yadaan iPhone-keena cusub Uguyaraan Vodafone, oo ah hawl wadeenka caalamiga ah ee ka muuqda liiska kuwa la heli karo ee Apple soo bandhigtay, in kastoo tirada hawl wadeenada bixiya adeegan ay sii kordhi karaan. Waqtigaan la joogo, waxaa la joogi doonaa waqtigii loo isticmaali lahaa Nano SIM-ka hadda si aan u wicino oo aan u helno xog ku saabsan qalabkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » ESIM wuxuu yimaadaa iPhone XS cusub, iPhone XS Max iyo iPhone XR qof walba
Moodalkan 'Dual Sim' ah oo leh 2 Sims ah, ma waxay ku iibin doonaan Shiinaha oo keliya? Kama helayno Apple Store-ka Maraykanka?
Waa maxay farqiga u dhexeeya nooca leh GPS iyo nooca leh GPS + Cellular?